Manamarika ny Andro eran-tany ho an'ny mpitsoa-ponenana ny Etihad Airways amin'ny fanampiana ireo mpitsoa-ponenana Syriana ao Jordania
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manamarika ny Andro eran-tany ho an'ny mpitsoa-ponenana ny Etihad Airways amin'ny fanampiana ireo mpitsoa-ponenana Syriana ao Jordania
Etihad Airways, National Airline of the United Arab Emirates, dia nanaiky ny Andro eran-tany ho an'ny mpitsoa-ponenana nataon'ny UN tamin'ny alàlan'ny famelabelarana hetsika fanabeazana sy fanomezana fanomezana maika ho an'ireo mpitsoa-ponenana Syriana ao amin'ny tobin'i Mrajeeb Al Fhood any Jordania.
Nanamarika ny 20 Jona isan-taona ny Andro manerantany ho an'ny mpitsoa-ponenana mba hifantohana amin'ny mpitsoa-ponenana an-tapitrisany sy olona nafindra toerana manerantany, izay noterena handositra ny tranony noho ny ady, fifandonana ary fanenjehana.
Ao anatin'ny fanoloran-tenany hanohana ny asa maha-olombelona, ​​nanokatra ny ivon-toerana Etihad Airways Learning and Development Center ny zotram-pitaterana mba hanomezana fahaizana IT sy fahaizan'ny solosaina ho an'ireo mpitsoa-ponenana, hanampiana azy ireo amin'ny ho avy.
Etihad koa dia nizara boky, kitapo ary fitaovam-panoratana ho an'ny ankizy 2,400 XNUMX ao an-toby, ao anatin'ny programa mitohy hanohanana ny fanabeazana amin'ireo vondrona sahirana.
Nanangana ny Etihad Tolerance Bakery ho an'ny UAE 'Year of Tolerance' ihany koa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mba hampivelarana ny fahaiza-manao mofomamy amin'ny vehivavy mpitsoa-ponenana ao amin'ny tobin'i Jordania, ary hanampy azy ireo hahazo vola amin'ny fivarotana mofo.
Mpahandro an-tsambo etihad no nampiantrano atrikasa fanaovan-tsakafo ary nanao fanamby fandrahoan-tsakafo ho an'ireo vehivavy, manome loka sy fitaovana fandrahoan-tsakafo ho an'ireo mpandresy sy mpandray anjara.
Ankoatr'izay, i Etihad dia niara-niasa tamin'ny Emirates Red Crescent sy ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny ary ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena hanome fanomezana fanampiana toy ny fitafiana, lamba firakotra, kitapo amenite ary sakafo maina ho an'ny fianakaviana ao an-toby.
Ny zotram-piaramanidina koa dia nizara firakotra fandriana 1,000 XNUMX ho an'ny hopitaly any an-toby, izay manome fitsaboana an'ireo mpitsoa-ponenana.
Mpikambana ao amin'ny fitantanana zokiolona ao Etihad, ny filan-kevitry ny tanora ao Etihad, ary ireo delegasiona mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Emirates Red Crescent sy ny Ministeran'ny raharaham-bahiny ary ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, dia niara-niasa tamin'ny ankizy sy ny mponina tao amin'ny toby tamin'ny hetsika fialamboly maro karazana.
Khaled Al Mehairbi, Filoham-boninahitry ny programa momba ny andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy, Etihad Aviation Group, dia nilaza fa: "Manolo-tena izahay hanampy ireo ankizy ireo hanohy ny làlam-pianarana, hanampiana ny ho avy tsaratsara kokoa ary hampiditra tanteraka ao amin'ny fiarahamonina."
“Ny fanabeazana no vato fehizoro amin'ny fampivelarana ny vondrom-piarahamonina rehetra, ary amin'ny fanohanana ny fahafahan'izy ireo mianatra dia afaka mampiasa vola amin'ny ho avin'ireto ankizy ireto izahay ary manampy azy ireo hiaro azy ireo amin'ny fanararaotana fanondranana olona na fampihorohoroana. Tiako ny misaotra ireo mpiara-miombon'antoka aminay sy ireo mpiasa an-tsitrapo izay nanatevin-daharana anay handray anjara tamin'ireny hetsika ireny sy nanatitra kojakoja. Ny ezak'izy ireo sy ny fotoanany dia nandany vola tamin'ny fanatanterahana an'io asa mendrika io. ”
Teo aloha, ny Etihad Airways dia nanolotra kojakojam-pampianarana ary nanampy tamin'ny fanavaozana ny sekoly any amin'ny firenena toa an'i India, Kenya, Serbia, Filipina, Bosnia, Uganda, Bangladesh, ary Sri Lanka.
Jeneraly Iraniana: 'nifehy tena' i Iran tamin'ny fitifirana ny fiaramanidina amerikana nisy 35 tao anatiny
Fifandraisana Skandinavianina: miditra amin'ny portfolio'ny seranam-piaramanidina Cornwall Airport Newquay ny SAS